Helping Hands for New Generation: Nan Oo Monastic School - Bed Set Donation Day (1)
Helping Hands for New Generation
Nan Oo Monastic School - Bed Set Donation Day (1)
၁၁၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၀၇ ခု နေ့ နန်းဦး ပရဟိတ ဂေဟာ နှင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်းမှာ ကူညီသောလက်များအဖွဲ့ရဲ့ စုစည်း လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အိပ်ယာနှင့် စားသောက်ကုန်ခြောက် အလှူပွဲကတော့ ဒီလိုပါ။
မနက် ၇ နာရီမှာကတည်းက အမကြီး မယဉ်ငြိမ်းနဲ့ သူမ အမျိုးသား ကိုကောမက်၊ ဒေါ်သက်စု တို့က ဒိုင်နာ ပုံ ပစ်က်အပ် ကားတစ်စီး ငှားကာ.. လှူဒါန်းမယ့် ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းအုံး၊ ခြင်ထောင်၊ ဖျာများ လှည့်လည် ယူခြင်းကို တာဝန်ယူပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပို့နှင့်ပါတယ်။
ကျွန်မ တင်ခိုင်လင်းကတော့ မနက် ၉ နာရီမှာ မြောက်ဥက္ကလာ လမ်းဝမှတ်တိုင်မှာ ချိန်းချက် ထားတဲ့ ဗော်လန်တီယာ နဲ့ မန်ဘာ အဖွဲ့ကို သွားရောက် ဆုံတွေ့ ခေါ်ယူပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အမ်အိုင်တီ ရုံးမှ ဗော်လန်တီယာ ၆ ဦးနဲ့ ဖိုရမ် မန်ဘာတွေ ဖြစ်သူ ကို observer နှင့် သူ့သူငယ်ချင်း (သူလဲ ဖို၇မ် မန်ဘာပါပဲ..ဟိ နစ်ခ်မေ့နေတယ်) နောက် သူတို့ သူငယ်ချင်းမလေး တစ်ဦး စုစုပေါင်း ၉ ဦး ရယ်၊ ကူညီသောလက်များ အဖွဲ့ဝင် မအေးမီမီထွန်း နဲ့ သူ့မ ညီမ ဗော်လန်တီယာ တစ်ဦးရယ်ကို ကျွန်မ က ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ကြိုဆို ခေါ်ယူသွားပေးပါတယ်။
မန်ဘာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုနေနေလွှမ်းမိုး သူက တော့ ကျွန်မတို့ အဖွဲ့ရဲ့ ပင်တိုင်အလှူ ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ယခုလဲ နန်းဦးကျောင်းမှာလည်း အိပ်ယာတွေခင်းဖို့ အခံ ဖုယောင်းပုဆိုး ၂၅၀,၀၀၀ (နှစ်သိန်း ငါးသောင်းဖိုး) ၀ယ်ယူ လှူဒါန်းထားသူ ဦးဇော်လတ် နှင့် အဖွဲ့ဝင်မန်ဘာ တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမောင်မောင်နေမင်း ကို စောင့်ပြီးခေါ် ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ကျောင်းကို ရောက်တော့ အမကြီး မယဉ်ငြိမ်းတို့၊ မရွှေသက်စု တို့ ရောက်နှင့် နေပါပြီ။ ခေါင်းအုံး၊ ခြင်ထောင်၊ စောင်၊ ဖျာများ စီတန်းထားပါတယ်။ ကျွန်မတို့နဲ့ ဗော်လန်တီယာ အဖွဲ့များရောက်တာနဲ့.. ကလေးတွေကို တန်းစီသူတို့ ဆီမယ်ရှိတဲ့ အဟောင်းများကို တစ်ပါထဲ သယ်လာခိုင်းပြီး ကျွန်မနဲ့.. ကိုနေနေလွှမ်းမိုးရဲ့ အမျိုးသမီး၊ သက်စုတို့က အမကြီးမယဉ်ငြိမ်း ရွေးချယ် စီစစ်ပေးလိုက်တဲ့ ကလေးများကို စာရင်းမှတ်၊ တိုက်၊ ပြီး အဟောင်းပေး အသစ်ယူ စာရင်းလုပ်ပါတယ်။ ဗော်လန်တီယာများက အဖွဲ့ခွဲပြီး၊ အဟောင်းကို သိမ်း (အဟောင်းသိမ်းတာမှာ ပြန်သုံးနဲ့ လွှင့်ပစ်) ခွဲပါတယ်။ နောက်တစ်ဖွဲ့က အသစ်တစ်စုံ ပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ဖွဲ့က တစ်နေရာမှာ ပြန်စီ ထိုင်ခိုင်းထားပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၇၁ စုံအားလုံး ဝေအပြီးမှာ. ကလေးကြီး (အသက် ၁၅-၁၆) တွေ ၃၁ ဦးကျန်တာတွေ့ရပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ အဟောင်းတွေထဲက တော်တော်ကောင်းတာတွေ ကို ကျွန်မတို့က ဆပ်ပြာမှုန့် ထုတ်ပေးပြီးလျှော်ခိုင်း ပြန်သုံးရမှာပါ။ မရလိုက်ဘဲ ကျန်တဲ့ကလေးကြီးတွေက မျက်နှာငယ်ငယ်တစ်ချို့ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့.. ကျွန်မတို့ရဲ့ အမာခံ အလှူရှင်ကြီး ဦးဇော်လတ်လဲ.. မနေနိုင်တော့ဘဲ.. မရလိုက်ဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကလေး ၃၁ ဦးစာ လုံးအတွက် အိပ်ယာအသစ် ကို သူပဲ တစ်လုံးတဲတစ်ခဲတည်း လှူပါမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် ကူညီသောလက်များအဖွဲ့မှ ဦးဇော်လတ်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိစွာနဲ့ နောက်ထပ် ၃၁ ဦးစာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ နောက် ၂ ပတ်နေရင် သွားထပ် လှူဒါန်းပေးမှာပါ။ နောက် အိပ်ယာ အသစ်ကလေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေကို စီတန်းထားပြီး အမကြီးမယဉ်ငြိမ်းက ဒီအိပ်ယာလေးတွေကို စည်းကမ်းတရှိ တရိုတသေထားဖို့..။ အခုလိုလှူဒါန်းပေးသူများအားလုံးဟာ ငွေတွေ ပေါများချမ်းသာ ကြယ်ဝလွန်းလို့ မဟုတ်ဘဲ မိမိ ၀င်ငွေထဲကနေ မသုံးမဖြုန်းရက်ဘဲ စိတ်ပိုင်းဖြတ် လှူဒါန်းပေးတာမို့ တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးဖို့ စတဲ့.. စတဲ့ ဆုံးမ စကားတွေကို ပြောကြားပါတယ်။
ကလေးငယ်များအတွက် အိပ်ယာများကို စုစုစည်းစည်း စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းရန်အတွက် အထပ်သား နဲ့ သစ်များဝယ်ကာ ၃ ဆင့် စင် ကျယ် နှစ်ခု ရိုက်ပြီး လှူဒါန်းဦးမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက်လဲ အလှူရှင် ရထားပြီးပါပြီရှင်။ အခုလော လောဆယ် လက်သမားတွက်ချက်ထားပြီး အကြမ်းဖျင်း ကုန်ကျစရိတ် တွက်လို့ရတာနဲ့ စလုပ်မှာပါ။
လှူဒါန်းမှုအားလုံးအပြီးမှာ နောက်ပိုင်း အက်တီဗတီများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ သန့်ရှင်းရေးကိစ္စများ တာဝန် ချထားရန် အဖွဲ့ ငယ် ၅ ဖွဲ့ကို အသက်အရွယ်မျှအောင် အဖွဲ့ခွဲတဲ့အလုပ်ကို ဗော်လန်တီယာများ အကူအညီဖြင့် ကျွန်မနဲ့သက်စု တို့က ခွဲပါတယ်။ တော်တော်လေး မှတ်ရခက်တဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေက တော်တော်များပါတယ်။
ကလေး ၁၀၀ ကျော်မှာ မြန်မာ စစ်စစ်က ၅ ယောက်လောက်သာပါပါတယ်.. ကျန်တာတော့ ပအိုဝ့်၊ ပလောင်၊ ရှမ်းတွေချည်း သာဖြစ်ပါတယ်။ အေ၊ဘီ၊စီ၊ဒီ၊အီး အဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ခွဲပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း မှာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ပေးရန်ရှိသည်များကို ကလေးငယ်များအဖွဲ့အလိုက်.. တာဝန်ချထားခြင်း၊ ဆုပေးခြင်း၊ ဒဏ်ပေးခြင်း စတဲ့ စနစ်များ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄င်းနောက်မှာ ဘုန်းကြီးများကို ဆွမ်းကပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က အမကြီးမယဉ်ငြိမ်းက သူ့မွေးနေ့အတွက် ထမင်းကျွေးလှူဒါန်းပါတယ်။ ကလေးငယ်များ၊ ဘုန်းကြီးအားလုံး၊ မန်ဘာ ဗော်လန်တီယာများပါ။ အဲ့ဒီအလှူထဲမှာ ဒီဖိုရမ်က ကုန်ခြောက်ဝယ်ယူလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မပီစပရစ်တို့၊ နေနေသူငယ်ချင်း စုစုတို့ ကိုမျိုးကျော်ထွန်းတို့ လှူဒါန်းပေးထားတဲ့ ထဲက ငါးခြောက် တစ်ချို့ကို ထောင်းကြော်..အစပ်ကြော်..ဟင်းခွက် များကို ထည့်လှူထားပါတယ်။ ကုသိုလ်များကို အမျှပေးပါတယ်။..အမျှ..အမျှ..အမျှ..ယူတော်မူကြပါ။ သာဓု..သာဓု.. သာဓု..
အထက်ပါ နန်းဦးကျောင်း နှင့် ပက်သက်သည့် Project များ အတွက် အလှူရငွေ နှင့် ကုန်ကျစရိတ် ရှင်းတမ်း
ဆောက်လုပ်ရေး ပရောဂျက်များ အတွက် သတင်း ဓါတ်ပုံ
Posted by Helping Hands4NG at 3:15 PM
Download ZawGyi Font Here
- To fulfill the basic needs of target benficiaries in the areas of health, education and psychosocial care and development.
- To help the orphanage centers and monastic schools where financial assistance and technical cooperation are required
Helping Hands for New Generation isanon-profit volunteer service organization formed withagroup of youth members who have shared vision, with the aim of improving access and hope of poor children to secured and happy life given priority to orphaned children, regardless of race and religious belief.
Albums of Our Activies
Our. Helping Hands in Reconsturction, rebuilding.....
59 Units still work in progress at Shwe Pyi Thar
Pilot 10 units at Shwe Pyi Thar - 13th May 2008
Cyclone Nargis Aid from HH4NG
ပညာ့သိပ္ပံ ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်း
MyinThar Myo Oo Library
National Day Activity
Scholarship Program II
Nan Oo Monastic School - Bed Set Donation Day
Nan Oo Monastic School - Current Projects
Nan Oo Monastic School - Information for Potential...
NanOo Monastic School - Health Care